कसले गर्यो नारायणहिटी छिरेर श्रीपेच चोर्ने प्रयास ? सिसा फुटाइसकेको अवस्थामा सेनाले यसरी जोगायो | समाचार
September 24, 2021 NepstokLeaveaComment on कसले गर्यो नारायणहिटी छिरेर श्रीपेच चोर्ने प्रयास ? सिसा फुटाइसकेको अवस्थामा सेनाले यसरी जोगायो
नारायणहिटी संग्रहालयमा राखिएको श्रीपेचको सिसा फुटाउने एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार संग्रहालय घुम्न छिरेका रुकुम पश्चिमका एक २५ वर्षे युवाले सिसा फुटाएर श्रीपेच लगाउन खोजेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । शुक्रवार बिहान अवलोकन गर्न पुगेका पश्चिम रुकुम मुसिकोट-११ का खीमबहादुर घर्तीले सिसा फुटाएर श्रीपेच निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । सिसा फु’टा’उँदा उनको हातसमेत का’टि’एको छ। उनलाई अहिले सेनाले नियन्त्रणमा राखेको छ।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार श्रीपेचमा ७ सय ५० टुक्रा हिराका हार छन् । १६ वटा मणिमाणिक्य छन् । श्रीपेचको पछिल्तिर कल्की झुन्डिएको हुन्छ । कल्की चराको पुच्छर हो । दाहालका अनुसार ‘बर्ड अफ प्याराडाइज’ नामको चरोको पुच्छरबाट कल्की बनाइएको हो । यो चरा दुर्लभ र संरक्षित चरा हो । यो चराको पुच्छर अमेरिकाबाट ल्याएर श्रीपेच आकर्षक बनाउने काम राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले गरेका थिए ।
श्रीपेचलाई शक्तिको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । दाहालका अनुसार श्रीपेचको सुरुवात शाहवंशीय राजा राजेन्द्रविक्रमको पालामा भएको हो । राणा प्रधानमन्त्रीले पनि श्रीपेच लगाउँथे । प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापाले श्रीपेच लगाएका थिए । ‘श्रीपेच शक्तिको प्रतीक हो,’ दाहालले भने, ‘यो लगाएपछि राजा–महाराजाले आफूलाई दैवीशक्ति प्राप्त भएको ठान्थे । मुकुट शक्तिको प्रतीक हो । देवीदेवतालाई पनि मुुकुट लगाइदिने प्रचलन छ ।’
श्रीपेच र राजदण्ड प्रदर्शनीमा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २९ जेठ २०६५ मा हस्तान्तरण गरेको श्रीपेच र राजदण्ड सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएको छ । नारायणहिटी संग्रहालय खुलेको १० वर्षपछि श्रीपेचलगायत १२ बहुमूल्य सामान प्रदर्शनीमा राखिएको हो ।
जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच र राजदण्डसहित राजकीय अवसरमा प्रयोग गर्ने सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर दरबार छाडेका थिए । त्यसको करिब १० महिनापछि २०६५ फागुन १५ बाट नारायणहिटीलाई संग्रहालयका रूपमा खोलिएको थियो ।
महामारी भाइरससँग मिल्जोजुल्दो ‘स्क्रब टाइफस’ रोग देखिन थाल्यो, के हो यो रोग ? कसरी संक्रमण गर्छ ?
बुधवारसम्म सचेत रहनु’ भन्दै मौमसविद्ले दिए यस्तो चेतावनी, ३ दिनको मौसम हेर्नुहोस्